थाहा खबर: भक्तपुर २ मा दुई गठबन्धनको चुनौती बन्दै अनुराधा थापामगर, को हुन् उनी?
भक्तपुर २ मा दुई गठबन्धनको चुनौती बन्दै अनुराधा थापामगर, को हुन् उनी?
भक्तपुर : दोस्रो संविधानसभा र रुपान्तरित संसदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४ जना सांसद थिए। उनीहरु संविधान निर्माणका समयमा र पछि संसदमा पनि निकै सक्रिय भूमिकामा थिए। २०७२ भदौको अन्तिम हप्तामा संविधानसभा नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा हरेकजसो धारामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसदहरुले संशोधन पेश गरेको थियो। संशोधन दर्ता गर्नेमा अनुराधा थापामगर, प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्लेहरु हुन्थे।
संविधानको अन्तिम मस्यौदामा नेमकिपाले प्रस्तावनासहित ७१ धारा र २ वटा अनुसूचीमा संशोधन दर्ता गराएका थिए। संविधान पारित गर्ने क्रममा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संशोधन दर्ता गर्ने नेमकिपाका सांसदलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका वाक्यांश संविधानसभामा धेरै दोहोरिए। तर उनीहरुले फिर्ता लिएनन्। यद्यपी ती प्रस्तावहरु बहुमतबाट अस्वीकृत भएका थिए।
'हामीले राखेका संशोधनको प्रस्ताव पारित नभए पनि हामी संविधानसभामा रहँदा देश र जनताको निम्ति बनाएको संविधानले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो' उनले भनिन् 'भारतीय दबाब व्यापक थियो। त्यसका बाबजुद पनि संविधान स्वीकार गर्ने पक्षमै मत दियौं।'
भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका २ मगरगाउँकी उनै अनुराधा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट दोस्रो संविधानसभामा सभासद बनेकी थिइन्। नेमकिपाकी केन्द्रीय सदस्य उनी संविधान निर्माणमा सक्रिय सहभागी थिइन् भने रुपान्तरित संसदमा समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिन्।
शिक्षा शास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेकी थापामगर यसवर्ष हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेकी छन्। उनीसँगै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना र वाम गठबन्धनकातर्फबाट नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष महेश बस्नेत प्रतिस्पर्धामा छन्। २०४८ सालको संसदमा सभामुख रहेका ढुंगाना २० वर्षपछि पुन सक्रिय राजनीतिमा आएका हुन् भने पूर्व उद्योग मन्त्री समेत रहेका बस्नेत यसअघि २०७० सालमा पनि त्यसै क्षेत्रमा उम्मेदवार थिए। यी दुई हेभी वेट उम्मेदवारका प्रतिस्पर्धी अनुराधा पनि दोस्रो संविधानसभा र संसदमा परिचित अनुहार नै हो।
यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले राप्रपा लगायतका दलसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको छ भने नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर वाम गठबन्धन बनाएको छ। भक्तपुरमा राम्रो संगठन रहेको नेमकिपा भने भक्तपुर २ मा एक्लै प्रतिस्पर्धामा छ।
अनुराधाले २०५६ साल माघ १० गते नेमकिपाको विद्यार्थी संगठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघले आयोजना गरेको नगरस्तरीय भेलाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्। त्यसपछि सानो थिमी शिक्षा क्याम्पस पढ्दा विद्यार्थी राजनीति अघि बढाएकी उनले नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको विभिन्न पदमा काम गर्दै हाल नेपाल क्रान्तिकारी महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेकी छन्।
सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएकी उनको परिवारमा राजनीतिमा लाग्ने उनी नै पहिलो व्यक्ति हुन्। 'राजनीति भनेको देश र जनताको निःस्वार्थ रुपले सेवा गर्नु हो भन्ने पार्टीका नेताहरुको भनाईबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा होमिएको हो' उनी भन्छिन्, 'जुनसुकै क्षेत्रमा रहे पनि देश र जनताको विना स्वार्थ सेवा गर्ने क्षेत्र रहेछ भन्ने बुझेपछि राजनीतिमा लागेकी हुँ।'
उनको पार्टीको प्रभाव भक्तपुर र कर्णालीको जिल्लामा मात्र छ। गएको संविधानसभामा जम्मा ४ जनामात्र सभासद थिए यस पार्टीका। तर थापालाई पार्टीलाई संख्याको आधारमा नभई विचारको आधारमा सानो र ठूलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। 'राजनीति भनेको विचार र सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्छ। देश र जनताको सेवा गर्ने वास्तविक ठाउँ हामीले राजनीतिलाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेमकिपाबाट थाहा पाइसकेपछि, अनि अरु पार्टी भनेको जनताको विश्वासघात गर्ने पार्टी रहेछ भन्ने बुझेपछि यसै पार्टीबाटै मैले राजनीति यात्रा शुरु गरेँ' थापाले भनिन्।
संविधानसभा र रुपान्तरित संसदमा निर्वाह गरेको भूमिका
नेमकिपाले शिक्षा, स्वास्थ्य अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ, स्वदेशमै रोजगारको बन्दोबस्त हुनुपर्छ, देशद्रोहीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ विषय संविधानमा नै समावेश गर्न खोजेको थियो। नेपालका धेरै उद्योग र कलकारखानाहरु बहुदलपछि निजीकरण गरिएकोमा पनि नेमकिपाले विरोध जनाएको थियो। 'जति पनि उद्योग र कलकारखाना छन् ती सबैलाई राज्यको बनाउनुपर्छ वा सामाजिकरण गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयहरुमा संसदमा अहम भूमिका खेलेको छु' थापाले भनिन्।
भारतसँग जोडिएको २६ वटा जिल्लाका ७० भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टर भन्दा बढी भूमि अतिक्रमण भइरहेकाले हाम्रो पाठ्यक्रममै समावेश भएको देशको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर नभएको थापा बताउँछिन्। 'वास्तवमा भन्ने हो भने ६० हजार हेक्टर भूमि भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ। त्यो भनेको झण्डै ६ सय १ वर्ग किलोमिटर हुन्छ, भनेपछि संविधानमा त्यो क्षेत्रफल तोक्नुपर्छ भन्दै आएको एउटा मात्रा पार्टी नेमकिपा हो' उनले भनिन्।
भारतले राष्ट्रिय र अन्तर्राट्रिष्य कानुन बनाएका बाँध र तटबन्धहरु हटाउन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने विषय संविधानमा राख्नुपर्छ भन्ने माग पनि नेमकिपाले उठायो।
संविधान निर्माणपछि संविधानसभा संसदमा रुपान्तरित भयो। त्यहाँ पनि जनसरोकारका विषय उठान गर्ने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने काममा नेमकिपाका सांसदहरु सक्रिय भए। 'नेमकिपाले हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र, सार्वभौमिकता र स्वाधीन राख्नको निम्ति भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ र हस्तक्षेप निम्त्याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाजलाई बुलन्द गर्‍यो' उनले भनिन् 'प्रगतिशील कर प्रणाली, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता समाजवाद उन्मुख नेपाल भनेको शब्दमा मात्र सिमित नभई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ भनी संघर्ष गरें।'
पार्टीको चाहनाभन्दा बाहिर केही हुन्न
नेतृ थापा नेमकिपाकी इमान्दार कार्यकर्ता हुन्। त्यसैले चुनावमा उम्मेदवार बन्ने कि नबन्ने, समानुपातिक तर्फ बन्ने कि प्रत्यक्षतर्फ भन्नेजस्ता विषय उनको रुची र चाहना भन्दा पनि पार्टीको निर्णय अनुसार भएको हो। 'हामी पार्टीका प्रतिवद्ध सिपाही हौं। पार्टीले जुन भूमिका दिन्छ हामीले त्यसलाई सहज तरिकाले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। पार्टीले हिजो मलाई समानुपातिक सूचिबाट संसदमा पठायो, अब जनताको बीचबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्ने जिम्मेवारी दिएको छ।'
पार्टीको तल्लो तहदेखि नै यसपटक अनुराधालाई क्षेत्र नम्बर २ मा उठाउनुपर्छ भन्ने माग भएको थियो। त्यसले पनि आफू प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भएको थापा बताउँछिन्। 'पार्टीले भोलि तिमी दैलेख, हुम्ला, जुम्लामा गएर एउटा साधारण सदस्य भएर काम गर भन्दा त्यो पनि हामीले मान्नै पर्छ।'
अनुराधाले आफ्नो चुनाव प्रचार प्रसारमा खटिइसकेकी छन्। केही कोणसभा र घरदैलो गर्ने योजना बनाएकी छन्। जनतालाई पार्टीको विचार, विगतमा संसदमा निर्वाह गरेको भूमिकाबारे जानकारी गराउने र मत हाल्ने तरिका सिकाउने उनले बताइन्। 'जनता र मतदाताको बीचमा गएर पार्टीको विचार, सिद्धान्त हामीले संसदमा खेलेको भूमिका र गतिविधि राख्दैछु' उनले भनिन् 'मुख्य रुपमा जनतालाई राजनैतिक रुपमा कसरी सचेत बनाउने, मतदातालाई आफ्नो मत सही तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे सिकाउने कार्य हुँदैछ।'
यसपटक पार्टीलाई भन्दा व्यक्तिलाई हेर्नुपर्ने बताउँछिन् अनुराधा। २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले १० पटक , एमालेले ४ पटक र माओवादी ३ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। आफ्ना प्रतिस्पर्धी दमननाथ ढुंगाना र महेश बस्नेतलाई उनले धेरैपटक सरकारमा गएर पनि काम गर्न नसकेका दलका प्रतिनिधिको रुपमा हेरेकी छन्। 'पटक पटक सरकारमा गएर पनि यी ठूला पार्टीहरुले देश र जनताको हितमा केही गरेको देखिंदैन' उनले भनिन् 'हिजो कांग्रेसले जे जे गर्‍यो, एमालेले पनि ४ पटक सरकारमा रहेर त्यही गर्‍यो, त्यही बाटो हिँड्यो, कांग्रेसकै पद चिन्हमा तालमा ताल मिलाएर एमाले हिँडेको छ।'
मतदान गर्नुअघि प्रमुख पार्टीहरुले विगतमा संविधानसभा र संसदमा निर्वाह गरेको भूमिकाबारे बुझ्नुपर्ने नेतृ थापा बताउँछिन्। 'उनीहरुको भनाइ र गराईमा फरक छ त्यसकारण पार्टीको सिद्धान्त, गतविधि उनीहरुले भने अनुसारको घोषणा पत्र लिएर सरकारमा रहेर काम गर्‍यो कि गरेन त्यो हेर्ने हो' उनले भनिन् 'जति पनि अरु पार्टीहरु छन् नेमकिपा बाहेकका उम्मेदवारहरु संसदमा गएर जति पनि विघेयकहरु आउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता आउँछ, त्यसमा हो र होइन भनेर हात उठाउने मात्र हो। नेमकिपाले उठाएका हरेक व्यक्ति सक्षम छन्, योग्य छन् उनीहरुले जनताको विश्वासलाई घात गर्ने छैनन् र आफ्नो सशक्त रुपमा भूमिका निभाउने छन्।'
के छ जित्ने आधार?
भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ मा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी विजयी भएको थियो। तर २०७० सालको निर्वाचनमा भने पराजित भयो। 'जुन क्षेत्रमा म उम्मेदवार भएकी छु त्यहाँ हाम्रो दलले विगतमा दुई पटक निर्वाचन जितेको इतिहास छ । नेमकिपाले यस क्षेत्रमा २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा भारी मतले विजयी भएको हो । २०७० सालमा पनि जित सुनिश्चित थियो तर आर्थिक चलखेलका कारण केही मतले हामी पछाडि पर्‍यौं। अहिले हाम्रो भूमिकाले गर्दा जनताले विश्वास गरेको छ त्यही कारण हाम्रो निम्ति बलियो छ र हाम्रो जित सुनिश्चित छ।'
नेमकिपाले संसद र संविधानसभामा निर्वाह गरेको भूमिकाको मुल्याङ्कन गर्दै मतदाताले यसपटक जिताउने थापाले विश्वास व्यक्त गरिन्। 'संविधानसभा र संसदमा कस्तो भूमिका खेल्यो? देश र जनताको पक्षमा सडकमा समेत हामी उभियौं। त्यो आधारमा नै हामीलाई जनताले मौका दिनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ' उनले भनिन् 'जनताका निम्ति जति कानुनी , वैचारिक, सैद्धान्तिक संघर्ष गर्‍यौं, त्यसलाई जनताले बुझेको छ जस्तो लाग्छ। हामीले जनतालाई विश्वासघात गरेका छैनौं।'
नेपाल मजदुर किसान पार्टी अहिलेसम्म सरकारमा गएको छैन। नेतृ थापाका अनुसार पुँजीवादी व्यवस्थामा नेमकिपा सरकारमा गएर काम पनि गर्न सक्दैन। 'फोहर पानीमा नुहाए सफा भइदैन भन्ने उखान जस्तै यो पुँजीवादी व्यवस्थामा गएर देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैनौं र गर्न पनि दिँदैन' उनले भनिन्। त्यसैले उनले मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुने सपना देखेकी छैनन्। भन्छिन् 'भविश्यमा पार्टीले निर्णय गर्ने नै छ, तर त्यतिबेलासम्म संसदमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिन्छ।'
हचुवाको भरमा खसी किनबेच, किसान मर्कामा
उदयपुर : गाउँघरमा घरैपिच्छे अहिले वैदेशिक रोजगारको प्रभाव छ। वैदेशिक रोगजारले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको दैनिकीलाई सहज बनाइदिएको छ। चाडपर्वम...
काठमाडौं : शाहवंशीय राजाहरूले लगाउने श्रीपेच सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नारायणहिटी...
दशैँमा बेहुलीझै सजाइएकाे मैतीदेवी मन्दिर (फोटो फिचर)
काठमाडाैं : दशैंको अवसरमा देशैभरका शक्तिपीठहरुमा दर्शनाथीको घुँइचो लाग्ने गरेको छ। देशैभरका शक्तिपीठहरुलाई बेहुली जस्तै झकिझका...